News - Plastic Ọgwụ na ịkpụzi shrinkage
Plastic ọgwụ ịkpụzi shrinkage bụ otu n'ime Njirimara mgbe ihe onwunwe okpomọkụ drips. Onu ogugu nke nkedo ogwu di nkpa ichoputa ihe nchoputa nke ikpeazu. Uru ahụ na-egosi ọnụọgụ nke nkwekọrịta nke ihe nrụpụta gosipụtara mgbe ewepụsịrị ya site na ebu wee mezie ya na 23C maka oge nke 48 awa.
Ekpebiri shrinkage site na akụkụ ndị a:
ebe S bụ ebu shrinkage ọnụego, Lr ikpeazụ workpiece akụkụ (na. ma ọ bụ mm), na Lm ebu oghere akụkụ (na ma ọ bụ mm). Typedị na nhazi ọkwa nke ihe plastik nwere uru na-agbanwe agbanwe nke ịda mbà. Mbelata ahụ nwere ike imetụta ọtụtụ mgbanwe dịka ike dị jụụ nke na-arụ ọrụ, ntinye na nrụgide obibi. Mgbakwunye nke fillers na ihe nkwado, dị ka eriri iko ma ọ bụ ihe nzacha ịnweta, nwere ike belata nsị.
Mwepu nke ngwaahịa plastik mgbe emechara ya bụ ihe a na-ahụkarị, mana crystalline na amorphous polymers na-agbada iche. Ihe eji arụ plastik niile na-adalata mgbe ha rụchara naanị n'ihi nsonazụ ha na nkwekọrịta kpụ ọkụ n'ọnụ ka ha na-ajụ oyi site na ọnọdụ nhazi.
Amorphous ihe nwere obere shrinkage. Mgbe amorphous ihe ajụkwa n'oge jụrụ frasi nke injection ịkpụzi usoro, ha retun ka a isiike plymer. Ngwongwo polymer nke mejuputara ihe amorphous enweghi uzo doro anya. Ihe omuma pf amorphous bu polycarbonate, ABS, na polystyrene.
Ihe na-eti mkpu nwere ihe na-agbaze agbaze na-agbaze Ihe mkpuchi polymer na-edozi onwe ha na nhazi usoro. Mpaghara ndị a nyere iwu bụ kristal nke na-etolite mgbe eme ka polymer dị jụụ site na steeti ya. Maka ihe eji eme polymer semicrystalline, nguzobe ya na ngwugwu ya na-agbakwunye na ngwongwo ngwongwo na mpaghara ndi a. nsị nke injectio maka ihe semicrystalline dị elu karịa nke amorphous. Ihe omuma nke ihe ndi ejiri ocha mee bu nylon, polypropylene na polyethylene.Ha depụtara ọtụtụ ihe plastik, ma amorphous na semicrystalline, na nsị ha na-agbaze.
Mwepu nke thermoplastics /%
ihe onwunwe ebu shrinkage ihe onwunwe ebu shrinkage ihe onwunwe ebu shrinkage
ABS 0.4-0.7 polycarbonate 0,5-0.7 PPO 0,5-0.7
Acryli 0.2-1.0 PC-ABS 0,5-0.7 polystyrene 0.4-0.8
ABS-naịlọn 1.0-1.2 PC-PBT 0.8-1.0 Polysulfone 0.1-0.3
Acetal 2.0-3.5 PC-PITA 0.8-1.0 PBT 1.7-2.3
Naịlọn 6 0.7-1.5 Polyethylene 1.0-3.0 PITA 1.7-2.3
Naịlọn 6,6 Ogba Polypropylene 0.8-3.0 TPO 1.2-1.6
Mmetụta nsị na-agbanwe agbanwe pụtara na nhazi nhazi nke a na-enweta maka polymer amorphous dị mma karịa nke ndị polymer crystalline, n'ihi na ndị na-eti mkpu nwere ihe ndị ọzọ e nyere iwu ma dị mma nke agbụ polymer, mgbanwe nke oge na-abawanye mbelata nke ukwuu. Ma na plastik amorphous, nke a bụ naanị ihe kpatara ya ma gbakọọ ya ngwa ngwa.
Maka polymer amorphous, ụkpụrụ ịda mbà abụghị naanị obere, mana ịda mbà n'onwe ya ngwa ngwa. Maka ụdị polymer amorphous dịka PMMA, nshịkọ ahụ ga-adị n'usoro nke 1-5mm / m. Nke a bụ n'ihi obi jụrụ site na ihe dị ka 150 (ọnọdụ nke gbazee) na 23C (ime ụlọ okpomọkụ) ma nwee ike ịmetụta ọnụọgụ nke mgbatị ọkụ.
Osote: Gịnị Bụ The Asatọ Categories Of Ọgwụ Ebu?